(၉)ကြိမ်မြောက်နှင့် (၁၀)ကြိမ်မြောက် ဒါဇင်ပလပ်စ် အလှူ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » (၉)ကြိမ်မြောက်နှင့် (၁၀)ကြိမ်မြောက် ဒါဇင်ပလပ်စ် အလှူ
(၉)ကြိမ်မြောက်နှင့် (၁၀)ကြိမ်မြောက် ဒါဇင်ပလပ်စ် အလှူ
Posted by etone on May 8, 2013 in Community & Society, Education, Environment, Events/Fundraise, Myanmar Gazette, News | 17 comments
အချိန်တွေ ကုန်မြန်လွန်းလှပါတယ် … ဒါဇင်ပလက်စ်ရဲ့ လစဉ် အလှူအတွက် ဘယ်မှာသွားလှူရမလဲ ကျောင်းရွေးခါနီးတိုင်း ခေါင်းလည်း စားကြရတယ် … လတ်လောတော့ ရန်ကုန်မြို့တွင်းက ဘကကျောင်းတွေကိုပဲ ဦးတည်လှူဒါန်းဖို့ စိတ်ကူးထားတာကြောင့် နီးစပ်ရာ ဘက ကျောင်းစာရင်းတွေလုပ်ရပါတယ် ။ ဘယ်ကျောင်းကို အရင်သွားရမလဲ ဆိုတာ မဲစနစ်နဲ့ ရွေးချယ်ရပါတယ် ။ ယခုလအတွက် မဲပေါက်သော်လည်း ၊ ကြိုတင်ဆက်သွယ်လို့ မရတဲ့အတွက် သွားမလှူဖြစ်ပဲ တခြား ကျောင်းတွေကိုသာ လှူဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်တွေလည်း ရှိပါတယ် … ။ ဒါဇင်ပလက်စ်အဖွဲ့ဝင်တိုင်း အလုပ်ကိုယ်စီသွားကြရတာကြောင့် အလှူနေ့ကွန်ဖမ်းဖြစ်ဖို့ စာတွေပို့ ၊ ဖုန်းတွေဆက်နဲ့ လှုပ်ရှားရင်း ၊ တလပြီး တလ ဖြတ်သန်းကြရပါတယ် ။
ဒါဇင်ပလက်စ်ရဲ့ (၉)ကြိမ်မြောက်အလှူအဖြစ် 6-4-13ရက်နေ့တွင် ၊ ရန်ကုန်တိုင်း တာမွေမြို့နယ်ရှိ သီရိမင်္ဂလာဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းသို့ စာရေးကိရိယာ ၁သိန်းဖိုးနှင့် ငွေတစ်သိန်းသုံးသောင်းလေးထောင်ကျပ်ကို လှူဒါန်းပြီးစီးခဲ့ပါတယ် ။ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဦးအဂ္ဂ၀ံသမှ လက်ခံရယူပြီး ရေစက်ချ အမျှပေးဝေခဲ့ပါတယ် ။ သီရိမင်္ဂလာ ဘကကျောင်းလေး ဖြစ်ပေါ်လာတာနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်က ယခုလိုပဲ ပြောပြသွားပါတယ် ။
ဒီကျောင်းလေးကို 1964 ခုနှစ် နွေရာသီမှာ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပါ ။ စေတနာ ညကျောင်းအနေနဲ့ ၊ အသက်အရွယ် ကန့်သတ်ချက်မရှိပဲ စာတတ်မြောက်ရေး အတွက် အဓိက ထားပြီး ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ် ။ 1965မှာ မြန်မာနိုင်ငံ စာမတတ်သူ ပပျောက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ ” အ ” သုံးလုံး လှုပ်ရှားမှုတွေ ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာ ဘက ကျောင်းအဖြစ် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ် ။ စတင်ဖွင့်ဖွင့်ချင်း နီးစပ်ရာ ရပ်ကွက်မှ စာသင်သား 300 မှ 350ခန့်ကို နေ့အတန်း ၊ ညအတန်းတွေ ခွဲပြီး သင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ် ။ စေတနာ့ ဝန်ထမ်းစာသင်ကြားသူများအဖြစ် ၊ ဘုန်းတော်ကြီးများက လုပ်အားပေးခဲ့ကြပါတယ် ။ 1975 မှာတော့ အစိုးရရဲ့ ခွင့်ပြုမိန့် နဲ့ တရားဝင် ဘက ကျောင်းအဖြစ် ရပ်တည်လာခဲ့တာ ယနေ့ထက်တိုင်ပါပဲ ။ သူငယ်တန်းမှ စတုထ္ထတန်းအထိ ယခုနှစ်စာသင်သား ဦးရေ 118 ဦးနှင့် ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစား ကိုရင် 28ပါးရှိကြောင်းလည်း သိရပါတယ် ။ ဆရာ၊ဆရာမ အင်အား ခြောက်ယောက်ခန့် ရှိပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်းအနေနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ 10နှစ်ကျော်ခန့်ကတည်းက ကုသိုလ်ယူ စာသင်ပေးနေတယ်လို့လည်း သိရပါတယ် ။ ခရီးစရိတ်အတွက်တော့ တဦးလျှင် 5သောင်းကျပ်စီ ပြန်စီစဉ်ပေးပါသတဲ့ …… ။ စာသင်ချိန်ကိုလည်း နေ့လည် 12 နာရီမှ စတင်ပြီး ညနေ5 နာရီ အထိပဲ သတ်မှတ်လိုက်ပါတော့တယ် … ။ လက်ရှိရပ်တည်နေပုံကတော့ ရံဖန်ရံခါ အလှူရှင်တွေ ရှိပြီး ၊ company ကြီးတစ်ခုက လေးနှစ်စာအပြီး လှူထားတာလို့လည်း သိရပါတယ် ။company က လှူဒါန်းငွေ လေးနှစ်စာက 2013/2014 စာသင်နှစ်အထိသာ ဖြစ်တာကြောင့် ၊ နောက်ထပ်ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက် အလှူရှင်တွေ လိုအပ်နေပါတယ်လို့ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးက မိန့် သွားခဲ့ပါတယ် ။ ဆက်သွယ်လှူဒါန်းချင်လျှင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် 545837ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ် ။ အမာခံ လှူဒါန်းနေတဲ့ company ကြီးတစ်ခုက.. လေးနှစ်ပြီး ဆက်မလှူတော့ဘူးဆိုတော့ …. ကျောင်းကြီးဆက်ရပ်တည်ဖို့ … ဘုန်းကြီးတွေ ခေါင်းခဲရပြီပေါ့ ။
စားပွဲနဲ့ ကုလားထိုင်နဲ့ … စာသင်ရတာမျိုးမဟုတ်ပဲ အခုလို အဆင်ပြေတယ်ဆိုရုံ …စာသင်ကြရရှာတယ်.. ဒီအတန်းလေးကတော့ .. နွေရာသီမှာပဲဖွင့်ပေးတဲ့ ယဉ်ကျေးလိမ္မာဗုဒ္ဓဘာသာ သင်တန်းလေးပါ ။
(၉)ကြိမ်မြောက်အလှူ ~ စာရေး ကိရိယာ ၁သိန်းဖိုး
(၉)ကြိမ်မြောက်အလှူ ~ အလှူငွေ ၁၃၄,၀၀၀ကျပ်
ဒါဇင်ပလက်စ်ရဲ့ (၁၀)ကြိမ်မြောက်အလှူကို ၊ 5-5-13 ရက်နေ့က ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်(၈)ရပ်ကွက် ရေကူးဘူတာရုံလမ်း ၊ ကမ္ဘာအေးစာတိုက်အနီးက ပညာသိပ္ပံ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းသို့ စာရေးကိရိယာ 90,000/- ကျပ်ဖိုး ၊ အလှူငွေ 115,000/- ကျပ်နှင့် ၊ ရွာသူ wow မှ ကွန်လွန်သူ ဖခင်ကြီးအတွက် ရည်စူးပြီး လှူဒါန်းငွေ20,000/-ကျပ်တို့ သွားရောက် လှူဒါန်းရာ တိုက်အုပ်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တပညာသာမိက လက်ခံခဲ့ပြီး ၊ အမျှဝေပေးခဲ့ပါတယ် ။ ကျောင်းလေး ဖြစ်ပေါ်လာပုံမှ စပြီး လက်ရှိ လည်ပတ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေအထိပါ ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး ဒေါ်နီနီထွန်းက စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရှင်းပြခဲ့သဖြင့် သိခွင့်ရခဲ့ပါတယ် .. ။
ကျောင်းကို 1957/58 နှစ်ခန့်လောက်ကတည်းက တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၊ စတည်ထောင်စ အချိန်မှာ စာသင်သူဦးရေ 30လောက်ပဲ ရှိခဲ့ပါသေးတယ် ။ တပိုင်တနိုင်အလှူရှင်တွေ ၊ လုပ်အားပေးဆရာ/မတွေနဲ့ ရပ်တည်ခဲ့ကြရပါတယ် ။ အစောပိုင်း စဖွင့်ခါစတော့ မူလတန်းသင် ဘကကျောင်းလေးအဖြစ် စတင်ခဲ့တာပါ ။ အလှူ ရှင်တွေ ၊ လုပ်အားပေးဆရာ/မတွေရဲ့ ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် ၊ 2004 ခုနှစ်မှာ သတ္တမတန်းထိ တိုးဖွင့်လာနိုင်ခဲ့ပြီး ယခုနှစ်တွင်တော့ သူငယ်တန်းမှ သတ္တမတန်းထိ စာသင်သူဦးရေ ၄၆၀ဦးကို ပညာသင်ပေးနေပါတယ် ။ နီးစပ်ရာမှ နွမ်းပါးသူ၊ ပညာရေးစရိတ် မတတ်နိုင်သူတွေပါမက ရွှေပြည်သာ ၊ လှိုင်သာယာ ၊ ဒဂုံစသော တခြားမြို့နယ်များမှ ကျောင်းလာတတ်သူတွေလည်း ရှိကြပါတယ် ။ပထမတန်းမှ သတ္တမတန်းအထိသာ စာသင်ခန်းဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးနေသော်လည်း ပညာထူးချွန်ပြီး ၊ စာဆက်သင်ဖို့ အခက်ခဲဖြစ်နေသူ တွေကိုလည်း ဘွဲ့ရတဲ့အထိ ကျောင်းထားပေးတယ်လို့လည်း သိခွင့်ရခဲ့ပါတယ် ။ ယခုလို အထောက်ပံ့ယူ ကျောင်းတက်ခဲ့သူ အများစုကတော့ ပညာရေးကောလိပ်သို့တက်ကြသူများပြီး ကျောင်းပြီး ဘွဲ့ရတာနဲ့ … ဒီကျောင်းမှာပဲ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအနေနဲ့ ဆရာ/မ ပြန်လုပ်ပေးကြတယ်လို့လည်း သိခဲ့ရပါတယ် ။ စေတနာဝန်ထမ်းများအတွက် ခရီးစရိတ်ကိုလည်း ကျောင်းတိုင်ဘုန်းကြီးမှ စီစဉ်ပေးတယ်လို့ …သိရပါတယ် .. ။ ကျောင်းစဖွင့်စဉ်အခါက ခရီးစရိတ်အဖြစ် တလ 200ကျပ်မှ စပေးခဲ့ကာ ၊ ယခုတလလျှင် လေးသောင်းနှုန်းဖြင့် စီစဉ်ပေးနေကြောင်းလည်းသိခဲ့ ရပါသည် ။ ဝေးလံတဲ့အရပ်က စာသင်သားတွေကိုတော့ ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစား လက်ခံပေးပေမယ့် ….. သင်္ကန်းဝတ်ဖြင့်သာ လက်ခံထားပါတယ် ။ လက်ရှိ ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစားနေသူ အရေတွက် 100 ၀န်းကျင်ခန့်ရှိပြီး ၊ ဆွမ်းစားရိတ်အဖြစ် တစ်နပ်လျှင် ကျပ်သုံးသောင်းပျှမ်းမျှ သတ်မှတ်ထားပါတယ် ။ သင်ကြားမှု အပိုင်းမှာ အခမဲ့ သင်ကြားပေးရုံမျှ မကပဲ … စာသင်အထောက်ပံ့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ …. စာအုပ်၊ခဲတံ ၊ဘောလ်ပင် အစရှိတာတွေကို ကျောင်းမှထုတ်ပေးတယ်လို့လည်း သိခွင့်ရခဲ့ပါတယ် ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်က စပြီး ၊ အစိုးရမှ မူလတန်းအရွယ်ကလေးများအတွက် အခမဲ့ ပညာရေး စနစ် စတင်လိုက်ရာ ၊ ယခု ဘက ကျောင်းအတွက်လည်း သင်ရိုးညွှန်းတမ်းစာအုပ်အချို့ … ခွဲတမ်းရခဲ့တဲ့အတွက် အစိုးရရဲ့ အခမဲ့ပညာရေးစနစ်ကို ထောက်ခံ အားပေးကြောင်းလည်း တိုက်အုပ်ဘုန်းကြီးမှ ပြောသွားခဲ့ပါတယ် ။ ပညာသင်ကြားလိုပါလျှက် .. ငွေကြေးအခက်ခဲကြောင့် ပညာသင်ကြားခွင့် မရနိုင်သူတွေအတွက် အဓိကထား စီစဉ် ဖွင့်လွှတ်ပေးထားတဲ့ မရမ်းကုန်မြို့နယ်က ပညာသိပ္ပံ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းလေးကို ဆက်သွယ် လှူဒါန်းလိုပါလျှင် တိုက်အုပ်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တပညာသာမိ (ဖုန်း 0949331694 ) သို့လည်းကောင်း ၊ ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး ဒေါ်နီနီထွန်း (ဖုန်း 0973100192)သို့လည်းကောင်းဆက်သွယ် လှူဒါန်းနိုင်ကြပါတယ်
(၁၀) ကြိမ်မြောက် အလှူ ~ စာရေး ကိရိယာ ၉၀,၀၀၀ကျော်ဖိုးနှင့် အလှူငွေ ၁၃၅,၀၀၀ကျပ်
ဒါဇင်ပလက်စ်ရဲ့ လစဉ် အလှူဆိုတာ လိုအပ်ချက်တွေများနေသေးတဲ့ ဘကကျောင်းတွေအတွက် ဆင်ပါးစပ် ၊ နှမ်းပက်သလိုပါပဲ ။ နှမ်းတစေ့နဲ့ ဆီမဖြစ်နိုင်မှန်း သိပေမယ့်လည်း ၊ လစဉ် အလှူရှင်တွေ ၊ ထပ်တိုးမန်ဘာတွေရဲ့ ပူးပေါင်းလှူဒါန်းမှုကြောင့် Mandalay Gazette Online မန်ဘာ လူ၁၂ယောက်မှ စတင်ခဲ့တဲ့ ဒါဇင်ပလက်စ်အဖွဲ့လေးမှာ အခုဆို အလှူရှင် ၄၀ကျော်နဲ့ … ဆီကြိတ်ဖို့ ကြိုးစားနေကြပါတယ် ။ ပညာရေး အထောက်ပံ့ပေးရန် တစ်ခုတည်းအတွက် ရည်ရွယ်ခဲ့တာကြောင့် ၊ ရန်ကုန်မြို့တွင်း မြို့နယ်များက အခမဲ့ကျောင်းတွေရှိလျှင်လည်း လက်လှမ်းမှီသလောက်သတင်းပေးစေလိုပါတယ် ။ ကိုယ့်နိုင်ငံက ဆင်းရဲ နွမ်းပါးတဲ့ ကလေးတွေ ၊ ပညာသင်ကြားချင်ပါလျှက် ငွေကြေးမပြည့်စုံမှုကြောင့် ပညာသင်ကြားခွင့်မရကြရှာတဲ့ ကလေးတွေအတွက် ၊ တဖက်တလှမ်းက အထောက်ပံ့ပေးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ ဒါဇင်ပလက်စ်ကနေ ဆက်သွယ် လှူဒါန်းလိုပါလျှင် info@dozenplus.org သို့လည်းကောင်း ၊ ဖုန်း 0973144421 သို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ် ။
သာဓု၊သာဓု၊သာဓု ပါ ဒါဇင်အပေါင်းတို့ရေ။
ပိုပြီး အောင်မြင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
အရီးလတ်ရေ .. အလှူပို့စ်နဲ့တော့ မဆိုင်တဲ့ ပျက်ကွက်မှုလေးတစ်ခု အတွက် တောင်းပန်ပါရစေ … ။
မမဆွိရဲ့ ပို့စ်ထဲမှာရေးတဲ့ ရေညှိထမင်းလိတ်လုပ်နည်းလေးပြောပေးဖို့အကြောင်း ဖတ်လိုက်ရပါတယ် .. အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကော့မန့်အနေနဲ့လည်း မပြန်ရေးဖြစ် …ပို့စ်အနေနဲ့လည်း မပြန်ဖြစ်သေးပဲ ပျက်ကွက်ခဲ့မိပါတယ် ။ ဒီတပတ်ထဲ ရေးပါ့မယ်လို့လည်း ကတိပေးပါတယ် ။
ဒါဇင်ပလပ် ရဲ့ လှုပ် ရှား မှု တွေ ကို မြင် ရ ကြား ရ တိုင်း
ဝမ်းသာ ပီတိ ဖြစ်မိပါတယ်ဗျာ
ဒါဇင်ပလပ် အဖွဲ့ ကြီး
အများအကျိုးကို ပို၍ပို၍ ဆောင် ရွက်နိုင် ပြီး
ပို ကောင်းတဲ့ နိုင်င် ငံတော် ထူထောင်ရေးကို
ပြောင်ပြောင် မြောက်မြောက် ကူညီနိုင် သူတွေ ဖြစ်ပါစေ လို့
အလှူအတွက် ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလေးတွေ ဒါ့ပုံရိုက်ပီး ပို့မယ်လို့ပြောထားမိတာ
နောက်လမှ ပေးမယ်နော် ဂျီးဒေါ်
သာဓု သာဓု သာဓု သုံးကြိမ် ခေါ်ဆိုပါတယ်
သာဓု သာဓု သာဓု ပါ ခင်ဗျာ …
ခုလို မြင်ရ တွေ့ရတာ ဝမ်းသာ ကြည်နူးစရာပါပဲ ….
ဒါဇင်ပလက်စ် အဖွဲ့ အခုလိုပဲ ရှေ့ဆက်ပြီး
အလှူပေါင်း မြောက်မြားစွာ ပြုလုပ်သွားနိုင်ပါစေလို့….
ဘုနးကြီးကျောင်း ပညာရေးကို ဒီရွားထဲမှာ ကန့်ကွက်နေကြပေမယ့် 
ဒီရွာထဲကပဲ ထောက်ပန့်တာတွေ့ရတော့ ကြည်နူးဝမ်းသာမိပါတယ် ။
ခြေလှမ်း ၁၀ လှမ်း မြောက်ပြီပေါ့နော်…
ငွေ အင်အားအပြင် လူအင်အားပါ စိုက်ထုတ်နိုင်တဲ့ သူတွေကို ချီးကျူးလေးစားပါကြောင်းရယ်။
၁၀ကြိမ်မြောက်အလှူမှာ ဒါဇင်ပလပ်နဲ့အတူပါဝင်ခဲ့ရလို့ အရမ်းကို ဂုဏ်ယူဝမ်းသာမိပါတယ်…
(ဟီး.. ဓာတ်ရှင်တွေထဲပေါသလိုတော့ ဖစ်သွားဘီ..)
သာဓု သာဓု သာဓု ပါတော် အားလုံးရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကိုလေးစားမိပါတယ်။
သာဓု သာဓု သာဓု ပါ ဗျာ….
ဒါဇင်ပလပ်စ် လူငယ်တွေကို လေးစားချီးကျူးပါတယ်
ဆထက်တပိုး အများအကျိုး ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ…
ဒီလောက်ကြည်နှူးစရာ ကောင်းတဲ့ အလှူပိုစ့်လေးများ ဘယ်သူကများ 0င်ပီး အချိန်တွေကို
အလကားသက်သက်ဖြုန်းတီးနေတာပါလိမ့်နော် … ဒီလိုလိုက်ပီး (-) တွေပေးနေတော့ ဘာအကျိုးအမြတ်များရပါလိမ့် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အလှူပိုစ့်လေးကတော့ အရောင်အသွေးစုံစုံနဲ့
တကယ့်ကို သက်0င်လှပနေတာပါပဲ …
ဒါဇင်ပလပ်ရဲ့ ရှေ့ခရီးလမ်း ဒီ့ထက်ပိုပီး သာယာ ဖြောင့်ဖြူးပါစေလို့ ……..
မနွယ်ပင်ရေ သွားမပြောနဲ့ အဲဒါ ………… အမျိုးနွယ်တွေလားမှ မသိတာ။ သူတို့က အလာဘဲရှိပြီး မပြန်တတ်ရှာသူတွေပါ။
ပို့စ်ဖတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း သက်သေထူခဲ့တာဖြစ်မယ် … ခိခိ